Incwadi ebhalelwe izisulu zokuhlukunyezwa | News24
Incwadi ebhalelwe izisulu zokuhlukunyezwa
Isithombe: SithunyelweUmbhali wencwadi ebhalelwe ukugqugquzela izisulu zokuhlukunyezwa uLindiwe Khumalo nomsebenzi wakhe wokuqala isihloko sawo esithi The Untold Story of an African Child a Victim of Abuse.
UMBHALI wencwadi isihloko sayo esithi The Untold Story of an African Child – A Victim of Divorce, uLindiwe Khumalo wase Imbali uthe ngalomsebenzi wakhe unethemba lokuthi abazoyifunda bazokwambuleka amehlo ngobunzima bempilo.
“Lencwadi ibalulekile ngoba ifundisa umuntu ukuthi kumele abhekane nobunzima obuba sendleleni yokuphumelela kwakhe. Okwesibili ukuthi kungekudala sifunde ngemibiko yokuhlukunyezwa kwezingane nabesifazane behlukunyezwa abantu ababathandayo nababathembayo, lencwadi ingusomlomo wabesifazane nezingane ezihlukumezekile,” kusho uKhumalo.
Uthe lencwadi iphinde icijise izingane zabafana ngokuthi kumele zibhekane kanjani nezinkinga zokuthandana nobudlelwano nabantu kanti futhi iphinde ivule imiqondo yabantu abahlukumezanayo ukuze bezobona ukuthi abantu besifazane nezingane abasiyona impahla yokuqinisekisa nokweseka abantu besilisa.
“Lencwadi ikhuluma ngezifundo engizitholile empilweni. Ibhalelwe ukuthi ngikhulume ngenkululeko yasebunganeni bami, izinhlungu zokukhula zasebusheni bami ezangishiya ngisesimeni esingesihle ukufinyelela enkathini yokuba mdala okube neziqephu zokuhlukunyezwa, isehlukaniso, ukukhulisa abantwana bami ngingedwa, impumelelo kanye nezimiso zemindeni. Lencwadi iqondiswe kubantu besifazane nezingane,” kusho yena.
Ngokusho kwakhe uKhumalo lencwadi uqale ukuyibhala ngonyaka odlule ngenyanga ka-Okthoba kanti uze wayiqeda ngoMeyi kuwona lonyaka. Uthe abantu abafisa ukuyithola lencwadi bengaxhumana naye ekhasini lika-Facebook elithi Book For Sale @lindiwejkhumalo, noma ku-Pinterest noma ku lindiwejkhumalo@gmail.com noma ku 078 919 4709 noma ku Instagram ku @lindiwejkhumalo. Kodwa uthe okwamanje ubhekane nenkinga yokuthola uxhaso lokuyisakaza izwe lonke.
“Kusukela eminyakeni eyishumi edlule benginawo umuzwa wokuthi kumele ngibhale ngempilo yami kodwa bengilokhu ngihlangabezana nezinkinga njengoba bengisendaweni lapho ebengihlukumezeka khona ngapha futhi ngibhekene nobunzima bokukhulisa amadodana ami amabili ngingedwa. Kodwa okungithokozisa kakhulu ukuthi kubona bonke ubunzima umuntu eseke wabhekana nabo amadodana akwazile ukuthi athole imfundo njengoba omdala eseqede ezomthetho kanti lomunye naye usebangeni lemfundo ephakeme,” kusho uKhamlo.
Uthe izifundo ezibalulekile ezitholakala encwadini yakhe ukuthi ukubekezela kunomvuzo omuhle, nokuthi konke kungafezeka ngoNkulunkulu kanti futhi lencwadi igqugquzela abantu besifazane nezingane ukuthi bephokophele phambili ngisho bebhekene nezinkinga zempilo.
Uqhube wathi umuntu obemukhuthaza ukuthi ayibhale ayiphothule incwadi yakhe ngumama wakhe odlule emhlabeni ngenyanga kaJuni.
“Ngaphambi kokudlula kwakhe emhlabeni ubeseyifundile imibhalo yami kodwa ngeshwa akayibonanga incwadi yona uqobo lwayo,” kusho uKhumalo.